သင်ယူမှုပုံစံများ၊ သတင်းဆိုးနှစ်ခု (ဒါပေမယ့်လည်းသတင်းကောင်းနှစ်ခု) | သိမှုလေ့ကျင့်ရေး
သင်ယူမှုပုံစံများ၊ သတင်းဆိုးနှစ်ခု (ဒါပေမယ့်လည်းသတင်းကောင်းနှစ်ခု)
သင်ယူမှု၊ ပညာရေး၊ သင်ကြားနည်း (သို့) ပညာရေးတွင်စိတ်ပညာ၌အလုပ်လုပ်သူများသည် "သင်ယူမှုပုံစံများ" ဟူသောမေးခွန်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ များသောအားဖြင့်ကျော်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားသောအခြေခံသဘောတရားများသည်အဓိကအားဖြင့်နှစ်ခုဖြစ်သည်။
လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်သင်ယူနည်း (ဥပမာ၊ အမြင်အာရုံ၊ နားထင် (သို့) အမြင်အာရုံ))၊
အချက်အလက်တွေကိုသူ့သင်ယူမှုပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်ပြရင်တစ် ဦး ချင်းစီကပိုကောင်းတယ်။
ဤအရာသည်သင်ယူမှုအခြေအနေ၏တင်းကျပ်သောရှုထောင့်ကိုသေချာစေသောသံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောအယူအဆများဖြစ်သည်၊ သူတို့ကငါတို့ကိုကျောင်း (နှင့်အပြင်ဘက်) ကိုအလားအလာကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအနေနဲ့၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးသားပညာရေးနဲ့အတူခွင့်ပြုတယ်။
Aslaksen နှင့်Lorås သူတို့သည်အဓိကသုတေသနရလဒ်များကိုအနှစ်ချုပ်။ ဘာသာရပ်အပေါ်သိပ္ပံနည်းကျစာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့လက်ထဲမှာတွေ့တဲ့အချက်အလက်ကရိုးရိုးလေးပါ။ တစ် ဦး ချင်း၏ ဦး စားပေးသင်ယူမှုပုံစံနှင့်အညီသင်ကြားပေးသည် (ဥပမာ၊ ကြည့်ရှုသူများအတွက်အမြင်အာရုံပုံစံဖြင့်တင်ပြခြင်း) ၎င်းသည်၎င်းတို့၏ ဦး စားပေးနည်းလမ်း မှလွဲ၍ အခြားပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်လေ့လာနေသူများအပေါ်မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်မှယူလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
ဤသဘောအရဆရာများစွာ၏ချဉ်းကပ်ပုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်၊ အထူးသဖြင့်ဆရာဖြစ်ပုံ၏ညွှန်ပြချက်များကိုလိုက်လံပြုပြင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်အလုပ်ပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ neuro- ဒဏ္ာရီ အမှန်တရားတစ်ခုထက်
ဘာသာရပ်အပေါ်သိပ္ပံနည်းကျစာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ထောက်ပြရှင်းလင်းသောဆရာအများစု (၈၉.၁%) သည်သင်ယူမှုပုံစံများကိုအခြေခံသောပညာရေး၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ပုံရသည်။ အားရစရာကောင်းတာတစ်ခုကငါတို့ကဒီနယ်ပယ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကသိသိသာသာမပြောင်းဘူး (ပညာရေးအဆင့်အမြင့်ဆုံးဆရာတွေ၊ ပညာရေးဆရာတွေပြောတာကဒီ neuro-myth ကအယုံကြည်ဆုံးဖြစ်ပုံရတယ်) ) ့။
ကန ဦး ခြေလှမ်းသည်အနာဂတ်ဆရာများနှင့်ပညာတတ်များအားသင်တန်းကာလအတွင်းမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်အချိန်ဖြုန်းပုံမပေါ်ပါ၊ အမှန်အားဖြင့်တူညီသောစာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွင်း၊ အထူးလေ့ကျင့်မှုအပြီးတွင်ဆရာများရာခိုင်နှုန်းသည်သင်ယူမှုပုံစံများကို အခြေခံ၍ ချဉ်းကပ်မှု၏အသုံးဝင်ပုံကိုယုံကြည်နေဆဲဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင်၊ ငါတို့သည်ကန ဦး ပျမ်းမျှ ၇၈.၄% မှ ၃၇.၁% သို့။
အင်း၊ ဒါပေါ့ ဒုတိယသတင်းကောင်းသင်ကြားရေးနှင့်သင်ယူမှုအတွက်တကယ်ထိရောက်သောနည်းစနစ်များ (လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြသထားသော)eရှိပါသည် ငါတို့ကသူတို့အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လှူပြီးပြီမရ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မဝေးသောအနာဂတ်၌ဤခေါင်းစဉ်သို့ပြန်လာလိမ့်မည် အခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သည်အထိရောက်ဆုံးနည်းစနစ်များအတွက်အမြဲရည်စူးသည်.
သင်လည်းစိတ် ၀ င်စားနိုင်ပါသည်။
သင်ယူမှုတိုးတက်စေရန်နည်းစနစ်များ - မည်သည်ကထိရောက်သနည်း။
ပညာရေးအဆင့်သည် IQ ကိုထိခိုက်သလား။
ပညာရေးအောင်မြင်မှု။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု။ ကျောင်းမှာကောင်းကောင်းတတ်ဖို့တကယ်အရေးကြီးတာကဘာလဲ။
ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အိုင်ကျူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု - အစမှအဆုံးကျောင်းသို့
လှုံ့ဆော်မှု IQ 1 -0နိုင်ပြီး!
Aslaksen, K. , & Lorås, H. (2018) ။ စံသတ်မှတ်ထားသောသင်ယူမှုပုံစံ hypothesis: mini-review စိတ်ပညာ Frontiers, 9, 1538 ။
Newton, PM, & Salvi, A. (၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ) ။ သင်ယူမှုပုံစံ neuromyth ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်မည်မျှအဖြစ်များသနည်း၊ ၎င်းသည်အရေးပါသနည်း။ လက်တွေ့ကျသောစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၌ ပညာရေး၌နယ်နိမိတ်(Vol ။ 5, p ။ 270) ။ နယ်နိမိတ်။
သင်ယူမှု, နှုတ်ဖြင့်သင်ယူခြင်း, အမြင်အာရုံသင်ယူမှု, သင်ယူမှုပုံစံများ
သင်ယူမှုပုံစံများ၊ သတင်းဆိုးနှစ်ခု (ဒါပေမယ့်လည်းသတင်းကောင်းနှစ်ခု)2021-08-232021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngသိမှုလေ့ကျင့်ရေးhttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/stili-di-apprendimento.-due-cattive-notizie-ma-anche-due-buone.jpg200px200px
ဒေါက်တာ Ivano Anemone
သူသည်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပညာဗေဒနှင့်ဆက်ဆံသည်။ သူသည်အချို့သော neurodegenerative ရောဂါများတွင်သိမြင်မှုဆိုင်ရာရှုထောင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းများစွာတွင်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်။
သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းစနစ်များ - တကယ်ထိရောက်လား။ အပိုင်း 2
သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းစနစ်များ - တကယ်ထိရောက်လား။ အပိုင်း 1
Dyslexia ။ ဘယ်သင်ယူနည်း
သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းစနစ်များ - တကယ်ထိရောက်လား။ အပိုင်း 2သင်ယူခြင်း၊ ဆောင်းပါးများ၊ မှတ်ဉာဏ်၊ လေ့လာမှုနည်းလမ်း၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာပညာ